कृष्ण कंडेलको लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी धरापमा अब हुनसक्छ बन्द ! – Tufan Media News
कृष्ण कंडेलको लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी धरापमा अब हुनसक्छ बन्द !
काठमाडौँ, नेपाली लोक दोहोरी कार्यक्रम इन्द्रेणीलाइ यो बेला निकै शंकट सृजना भएको छ।
युटुबमा प्रकाशन भएका अधिकंश कार्यक्रमलाइ दैनिक जसो कपीराइट लाग्न थाले संगै यतिबेला कृष्ण कंडेल र इन्द्रेणी टिम त’ना’बमा छ। आफुले चिनेको र नजिककै कलाकारबाट उक्त कार्य भएको भन्दै उनि मिडियामा आएका थिए।